Camping Urlaub Mit Der Familie - Wohnmobil, Zelt Und Los Geht's
Caravan na tranolay
Mampiavaka ity karazana fialantsasatra ity ny fahazoana traikefa
Camping ist in der heutigen Zeit eine Urlaubsart, die sich einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreut. Dies hat gleich mehrere Gründe, denn ein Campingurlaub vereint zahlreiche Vorteile in sich, welche ein Urlaub mit dem Flugzeug nicht hervor zeigen kann. Doch was sind die Vorzüge eines solchen Urlaubes und wie können sie auf die richtige Art und Weise genossen werden?
Milasy miaraka amin'ny fianakaviana iray manontolo
Voalohany indrindra, mazava ho azy, ny antony iray lehibe amin'ny fialan-tsasatry ny mpianakavy dia ny fahafahan'ny mpianakavy rehetra mandany fotoana miaraka. Izany dia ahafahan'ny fianakaviana miara-mitombo bebe kokoa. Inona moa no tanjon'ny fialantsasatra ho an'ny mpianakavy dia ny fiarahan'ny fotoana manome ny fianakaviana fotoana ahafahan'ny olona mifanakaiky lavitra ny fiainana andavanandro manahirana. Amin'ny fialantsasatry ny toby dia misy zavatra vitsivitsy kasaina alohan'ny handehananao mba hahazoana antoka fa mahomby ny fialantsasatra.
Mikasa ny fialantsasatra amin'ny lasy
Toy ny fialantsasatra hafa, ny lasy dia mitaky fandaminana tsara koa mba tsy hisian'ny tsy ampoizina mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Misy dikany ny manamboatra lisitra fizahana andro vitsivitsy alohan'ny fiaingany, izay anoratana ireo zavatra rehetra tsy maintsy raisina am-pialan-tsasatra. Ny tsara indrindra dia ny manao izany amin'ny fianakaviana iray manontolo.
Mpikambana marobe no miasa amin'ny lisitra fanaraha-maso miaraka amin'izay ary mitombo ny vintana fa tsy misy hadino ao an-trano. Ny kitapo fitsangatsanganana dia tokony ho feno 1-2 andro alohan'ny hiainganana mba tsy ho lasa lehibe loatra ny adin-tsaina amin'ny fiomanana amin'ny fialantsasatra. Avy eo ny fianakaviana dia manana fotoana hieritreretana raha toa ka hadino ao an-tokantrano ny entana iray tena ilaina.
Indrindra fa rehefa miala sasatra miaraka aminao ny ankizy kely dia tsara ny mitondra kitapo vonjy taitra voalohany miaraka aminao mba hanasitranana ratra kely eny an-toerana. Mazava ho azy fa tsy ny atin'ny kitapo fitsangatsanganana ihany no zava-dehibe. Ny toerana fialan-tsasatra dia tokony ho nomanina tsara ihany koa. Eto koa dia zava-dehibe ny mieritreritra ireo mpikambana kely ao amin'ny fianakaviana.
Amin'ny dia fitsangatsanganana dia mety any anaty ala, any amin'ny toerana madio, amin'ny faritra be tendrombohitra na eny amoron-dranomasina ny toerana alehanao. Na izany aza, tokony hotandremana hatrany mba hahazoana antoka fa mora idiran'ny mpitsabo na hopitaly rehefa mandray anjara amin'ilay fitsangatsanganana ny tanora ao amin'ny fianakaviana. Rehefa dinihina tokoa, dia mety hitranga foana ny fisian'ny vonjy taitra ary avy eo mandoa vola raha efa nomanina mialoha. Amin'ity fotoana ity, mazava ho azy, mipetraka ny fanontaniana hoe aiza no toerana mety indrindra amin'ny fialantsasatra fitobiana miaraka amin'ny fianakaviana.
Ny zavatra mahafinaritra amin'ny fialantsasatra fitobiana miaraka amin'ny ankohonana dia ny fisokafan'ny toerana fitsangatsanganana rehetra ary ny fanapahan-kevitra dia azo raisina amin'ny fotoana fohy momba ny toerana haleha manaraka. Eto dia tombony lehibe raha toa ka mandeha miaraka amin'ny karajia na trano finday ny fianakaviana, satria ireo namana ireo no ahafahana mivezivezy amin'ny faritra onenana.
Indrindra ho an'ireo fianakaviana te-ho lavitra ny fiainana andavanandro nefa tsy te hiala amin'ny rendrarendra, ny mpivaro-tena na ny finday dia fomba tsara hanombohana ny fialantsasatry ny lasy. Ny tombony azon'ireo safidy mitoby ireo dia ny fiankinan'ny fianakaviana ao am-pandriana sy hampiasa ny fidiany manokana, satria maro ny olona tsy te hanao raha tsy misy ireo antony ireo rehefa mitoby.
Ny fandehanana manao vakansy amin'ny fiara toy izany dia ahafahana mitondra kojakoja fitetezam-paritra feno miaraka aminao, satria misy toerana fitahirizana ampy handraisana ny zavatra rehetra izay tsy misy rehefa mandeha fiara mandeha vakansy. Ho fanampin'ny habaka fitehirizana misy, ny fahalalahana mivezivezy tanteraka rehefa mivezivezy amin'ny karajia na trano finday dia mazava ho azy fa hotononina satria ny fianakaviana dia afaka mitety izay toerana halehany rehetra izay tiany ary amin'ny fomba toy izany dia mitsidika toerana maro samihafa mandritra ny fialantsasatra iray.
Mazava ho azy fa mandritra ny dia lavitra dia mazava ho azy fa mifandimby matetika ny mpamily mba hisorohana ny havizanana amin'io fomba io. Fa mazava ho azy ny fialantsasatra fitsangantsanganana miaraka amin'ny fiara finday toy izany koa dia misy fatiantoka sasany izay tokony hodinihin'ny fianakaviana. Mazava ho azy fa mandany fotoana be ny dia. Noho izany ny fianakaviana dia tsy maintsy manantena fotoana be dia be alohan'ny hahatongavany any amin'ny toerana fialan-tsasatra irina.
Ity zava-misy ity dia mety ho enta-mavesatra lehibe, indrindra ho an'ireo ankizy kely tsy zatra dia lavitra. Ny dia lavitra dia mifandray koa amin'ny vidin'ny solika lafo. Arak'izany, misy dikany ny fametrahana habetsaky ny vola azo lany amin'ny lasantsy alohan'ny handehanany miala sasatra. Raha vantany vao manakaiky ny fetra, dia tokony hanahy ny fianakaviana raha tonga ny fotoana hanaovana ilay dia hiverina. Ny vidin'ny vidiny iray hafa izay mila raisina dia ny sarany amin'ny toeram-pilasiana maro, izay tokony hatao raha te-hijanona eo ny fiaranao handanianao ny vakansy any.
Amin'ny ankapobeny anefa dia efa akaiky io karazana fialantsasatra io ary mihamaro ny fianakaviana mahita fialan-tsasatra fitobiana miaraka amin'ny karajia na tranony finday ho azy ireo. Mazava ho azy fa tsy ilaina ny fananan'ny fianakaviana fiara toy izany. Ireo izay tsy mahay mividy ny tranony finday manokana dia afaka manararaotra ny serivisy natolotry ny mpanome maro ary manofa fiara mandritra ny fotoana fialan-tsasatry ny fianakaviany. Amin'izany no ahafahan'ny tsirairay mankafy ny tombony amin'ny fialantsasatra fitobiana. Na izany aza, misy karazana lasy hafa izay malaza ihany koa amin'ny fianakaviana manan-janaka ary matetika no malaza kokoa aza, na dia tsy mahazo fampiononana aza.
Ny fialantsasatra amin'ny lasy miaraka amina lay dia tsy mahasakana ny olona maro amin'ny voalohany, nefa misy ihany ny fianakaviana mampiasa fitsangatsangana mandritra ny alina ao anaty lay. Mazava ho azy, ny lay dia tsy manome fampiononana betsaka toy ny camper na karavanina.
Na eo aza izany, ity karazana lasy ity dia mampiseho ny fiheverana am-boalohany an'ity fialantsasatra ity ary misy antony mahafinaritra, indrindra ho an'ny ankizy, izay midika fa hankafy ny fialantsasatra ireo tanora.
Na dia mitoby amin'ny tranolay aza ianao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mahita ny toerana mety amin'ny fialan-tsasatrao. Soso-kevitra ny hifandraisana amin'ny fitantanan-draharaha mifandraika amin'ny famaritana raha misy fandeferana ny lasy. Raha manana fahazoan-dàlana ofisialy ny fianakaviana dia tsy misy manakana ny fitobiana an-day. Amin'ity karazana lasy ity dia misy ny fotoana mety hitobiana eo afovoan'ny natiora, izay ahafahana manadino tanteraka ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro. Betsaka ny zavatra ho hita eto ary manana ny vintana ny tanora hanao zavatra amin'ny natiora.
Na izany aza, ny fialan-tsasatra ataon'ny vondrona dia tokony hampiasaina handaniana fotoana miaraka amin'ny fianakaviana. Ohatra, misy ny fotoana hirosoana amin'ny dia an-tongotra miaraka amin'ny fianakaviana. Fa ny fialam-boly hafa koa dia azo atao miaraka, satria rehefa nifidy lay dia tapaka koa ny fanapahana herinaratra mandritra ny fotoana fialan-tsasatra, betsaka ny fotoana azo apetraka ao amin'ny fianakaviana. Ny lafiny ratsy iray amin'ny fijanonana ao anaty lay dia azo antoka fa ny fanamorana. Amin'ny tranga maro dia mila faharetana kely ihany koa ianao hananganana tranolay. Na eo aza izany, ny fialantsasatra fialantsasatra amin'ny tranolay dia fomba tsara handaniana fialantsasatra ho an'ny fianakaviana.
Ny fitsangatsanganana dia mety tsy ho solon'ny fiankinan'ny fianakaviana rehetra amin'ny fialan-tsasatra, satria tetikasa iray izay manatona olona te-hahazo ny halavirana mety amin'ny fiainana andavanandro. Fianakaviana maro izay nampiasa ny fialan-tsasatr'izy ireo handeha hitsangatsangana dia mamerina ity karazana fialantsasatra ity, satria ny ankizy indrindra indrindra dia mankafy mitoby be.
Fa ny olon-dehibe ihany koa dia manaiky ny tombony an'ity karazana fialantsasatra ity. Lavitry ny fizahan-tany be any amin'ny faritra amoron-dranomasina izay sakanan'ny hotely lehibe, misy ny fahafaha-mivezivezy manerana ny firenena miaraka amin'ny tranonao misy kodiarana any an-trano ary mankamin'ny toerana tena mahaliana ny fianakaviana. Amin'izany fomba izany dia azo atao ny manatanteraka ny faniriana rehetra an'ny olona ao amin'ny fianakaviana.
Midika izany fa afaka miandrandra ny fialan-tsasatra ny mpianakavy rehetra ary mitondra ny heviny miaraka aminy, mba hiara-handamina ny fialan-tsasatra. Ny fialantsasatry ny toby dia manome fotoana tsy hanarahana ny fironana amin'ny fizahan-tany be dia be ary hikatsaka fialantsasatra tena manokana izay tsy hita ao amin'ny masoivohon'ny fizahan-tany.
Ny traikefa koa dia manenjika tanjona iray hafa, izay matetika mitranga, indrindra amin'ny fianakaviana. Tsy maninona na fialan-tsasatra no anaovana ny fialantsasatra, ny tranony na tranolay. Voalohany indrindra dia ny fanamafisana ny fiarahamonina ao anatin'ny fianakaviana. Ny fotoana iarahana dia azo antoka fa tsy hay hadinoina ary manome antoka fa haverina ny fialan-tsasatra.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 15. May 2020 15. Jolay 2021 Sokajy Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords Camping, fialantsasatra fialantsasatra, Camper, Caravan, lay, filasiana
indray Lahatsoratra taloha: Mianara tsara - sekoly sy fiainana
more Lahatsoratra manaraka: Qi Gong | Fahasalamana sy fahasalamana
Boky ho an'ny ankizy - ny famakiana mafy dia mampiroborobo ny fahaizany miteny
Fampianarana, akaninjaza & sekoly (21)
Fialam-boly & fialamboly (11)